Tetikasam-pahaizana mahomby momba ny fanalàna ny raki-pehezanteny amin'ny Google Analytics
Ny fanatrarana rakitsoratra mivantana sy madio avy amin'ny fifamoivoizana bot sy spam dia maneho bebe kokoa momba ny fahaiza-miasa momba ny raharaham-barotra sy ny famolavolana fanapahan-kevitra. Nandritra ny herinandro vitsy lasa, ireo fikambanana madinika dia manana olana amin'ny fifampiraharahana amin'ny fifamoivoizana sy spam ao amin'ny antontan-kevitra momba ny fampielezan-kevitra. Soa ihany, Google dia tonga nanafaka azy ireo taorian'ny nanehoany ny famoahana tao amin'ny Google Analytics izay manampy ireo orinasa sy fikambanana hanofanana ireo spam referrer sy ireo spiders sy bots fantatra.
Araka ny voalazan'i Oliver King, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt , dia misy spam toy ny darodar, ny bokotra dia nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny sehatr'ireo orinasa B2B sy B2C miasa ao amin'ny sehatra an-tserasera - ejector design. Ny spam referrer dia mampiditra hosoka amin'ny tranokalanao ary mampitombo ny isan'ny mpitsidika ao amin'ny tranokalanao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny mpitsikilo dia maneho azy ireo ho toy ny mpitsidika no resahina amin'ny tranokalanao amin'ny iray amin'ny sehatra misy anao ho toy ny legit. Amin'ny farany, ny fifamoivoizana dia mamarana ny famoronana pop-ups sy malware misesisesy amin'ny fampielezan-kevitra.
Ny antontan'isa milaza fa mihoatra ny ampahatelon'ny fifamoivoizana hita ao amin'ny aterineto no manondro ny spam. Ny spam referrer dia mandany ny fotoanao amin'ny alàlan'ny fanovana mankany amin'ny mailaka tsotra sy manova ny fepetra fandrosoana sy ny angon-drakitra, indrindra raha ny tranokalanao no miteraka fifamoivoizana kely.
Ny fiantraikan'ny mpifoka rongony amin'ny metatrao
Ny marika ao amin'ny votoaty dia mihevitra ny mpanjifa marobe fa ny bots, ny sponjy, ny spam ary ny malware izay niditra tao amin'ny tranonkalany dia nalain'ny Google Analytics. Na dia izany aza, ny sasany amin'ireo trosan'ny malware sy ny bot dia tsy mandinika ny fizotry ny famaritana napetraka napetrak'i Google, ary miafara amin'ny fampiharana ny metrika.
Amin'izao fotoana izao dia mampiasa ny ID ny tompona tranonkala mba handefa fitsapana izay manimba ny statistika. Ireo spamman amin'izao fotoana izao dia afaka mandefa fitsapana sy mandoto ny angon-drakitrao raha tsy mifandray amin'ny servero amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny Google Analytics ny hacker izay mampiasa ny ID misy anao mba hampifandray ny servisy GA dia tsy azo esorina amin'ny fepetra manerantany ampiasaina hanakanana spammers sy mpanararaotra.
Ahoana ny fandroahana ny mpampiasa anao amin'ny alalan'ny rakitsoratrao
Ny fampiharana ny filalaovana sy ny fizarana an-dàlambe hanapahana ny spammers dia mahomby. Ny filtres sy ireo mpampiantrano valin-teny manan-danja dia manampy amin'ny fanakanana ireo spammers mahasosotra mamela ny angon-drakitrao. Ampiharo io fomba fanao io hanafoanana ireo mpitsikilo amin'ny data.
Mamorona sivana vaovao
Fenoy ny fampidirana sivana.
Fenoy ny anaranao sivana. Amin'ity tranga ity dia ampiasao ny 'Spam referrer eklesia'
Ampiasao ny karazan-drindrinao. Ampiasao 'karazany manokana' amin'ity tranga ity
Fohy ny spam referrera amin'ny fampiasana ny fomba fanefitra tianao indrindra
Amin'ny maha-mpividy tranonkala anao dia azonao atao ny manapa-kevitra ny hanilika ny spam referrer amin'ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny famoronana sivana ho an'ny sivana na amin'ny fampiasana ny mpampiantrano. Ireo vahaolana roa dia miasa toy izany ihany koa amin'ireo lafiny sivana. Ankoatr'izay, ny fampiasana ny famandrihana anaran-tserasera dia mitaky fikojakojana bebe kokoa ary ho mailo rehefa misy fikambanana afaka mamoy ny angon-drakitra. Araho io vahaolana voalaza etsy ambony io mba hanafoanana ny spam referrer amin'ny angon-drakitrao. Ny Google Analytics dia mampiasa ny lanjany sy ny fampahalalana manan-danja amin'ny spammers mba hanakanana sy hanafoanana azy ireo amin'ny angon-drakitrao. Ireo orinasa maniry hampiasa ny lisitry ny IAB hanaisotra ireo botsaka sy spider fantatra dia afaka manoratra isan-taona mba hahazoana mpikambana manontolo andro.